Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia si iPhone
Qalabka S60 leeyihiin sharciyo adduunka muddo dheer, laakiin hadda jeer ay isbeddesho. Hordhac ah android iyo sidoo kale hab doorin ee Steve Jobs ku sameeyey Inc Apple ah. xaqiijiyey in gmail, kuwanu waxay ka iman kala duwan ee dadweynaha guud. Tageen maalmahaan marka ay dadka isticmaalan in ay iibsadaan Nokia E taxane Iyagoo kibir iyo sharaf iyo hadda qalabka aan la tixgeliyo oo kaliya dhacsan laakiin waa la bedelay iPhone xawaaro degdeg ah oo ay u dhowr arrimood oo dadka isticmaala ku hoggaaminaya sida xiriir kala iibsiga ka qalab Nokia jir ah u cusub iPhone. Tutorial Tani hanuuniyo dadka isticmaala illaa ay hawsha ka mid ah wareejinta xiriirada ka qalabka S60 jir ah in ay ku ekaadaan iPhone cusub ee aragtida fudayd ee user iyo sidoo kale hanaanka wareejinta.
Qeybta 1: Mid ka mid ah click phone Nokia inay kala iibsiga iPhone
Qeybta 2: SIM card kala iibsiga
Qeybta 3: Google nidaameed
Qeybta 4: PC Nokia Suite
Wondershare MobileTrans shaki la'aan waa software ugu fiican in yimaado oo waafaqsan mawduuca in la siiyay qaybtan tutorial ah. Waxaa sidoo kale in la xusay in dib u eegista user arrintan la xiriira ku keeni qofka xaqiiqada ah in barnaamijka software tani waa fududahay in la isticmaalo iyo waxay leedahay faa'iidooyin ku jira line la shuruud user. Si loo hubiyo in ugu fiican waxa lagu sheegay tutorial this tallaabo hagitaan talaabo talaabo ayaa sidoo kale soo bandhigay si loo hubiyo in dadka isticmaala ay raacaan waxaa si aad shaqo u qabtay si dhaqso ah, si kastaba ha ahaatee ka hor Socota geedi socodka soo socda waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah barnaamijka software:
. 1.It waa ammaan in la isticmaalo sida jiro technology daruur ku lug leh arrintan la xiriira ma
2.It wareejin karaa 90,000+ xiriirada in go hal.
3. Waxa ay taageertaa macruufka cusub 9, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 plsu / 6 / 5s / 5/4.
1.Nokia S60 qalab
3.Respective USB fiilooyinka
Tallaabada 1. user u baahan yahay inuu soo booqdo website-ka rasmiga ah ee Wondershare ay u soo bixi barnaamijka. URL ayaa u horseedi doonta user si toos ah barnaamijka waa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ oo mar barnaamijka software-ka ayaa lagu soo bixi Waxa lagu talinayaa in la hubiyo in barnaamijka waxaa maamula si ay u helaan interface ugu weyn .
2.Beerta Tallaabada user u baahan tahay in lagu xiro qalab si ay computer ka dhex fiilooyinka ay USB kala ah si loo hubiyo in software iyaga lagu ogaadaa iyada oo aan arin kasta.
Tallaabada 3.Beerta user markaas u baahan yahay in la hubiyo in ay "Start Copy" button la isku soo riixayo si howlgalka xudunta u ah geeddi-socodka la bilaabay taas oo software ah ayaa soo bixi.
Tallaabada kala iibsiga 4.The xogta ka dhici doonaa garoonka mar mar kala iibsiga la soo gabagabeeyo ka mid madal si kale geeddi-socodka ah ayaa sidoo kale ku dhammaato.
Waxaa sidoo kale waa hab fudud oo taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican waxaa loo dhiibaa qofka u isticmaalaya in ugu wanaagsan ee suurto gal ah hab oo talaabo talaabo ah sida lagu faray. Waxa kale oo loo arki karin, oo ah geedi socod laawe sida ay tahay mid aad u sahlan tahay in la raaco iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale ka dhigayaa suurto gal ah in inta badan ee isticmaala in ay raacaan iyaga oo aan wax ka kaaftoomi iyo dhibaato.
Waa habraac laba talaabo qayb ka mid ah oo la raaci karo marka shuruudaha soo socda ay dhammaystirmaan waa
qalab 1.Nokia S60
card 3.SIM isagoo xiriirada in lagu wareejiyo
1 beddelashada xiriirada Nokia in SIM card
Waxaa loo arki karaa qaybta hore ee habka laba qayb ka mid ah SIM wareejinta ee xiriirada ka Nokia si iPhone. Ka dib waa habka arrintan la xiriira.
Tallaabada 1.On phone Nokia ah user uu riix badhanka menu.
Tallaabada 2.Once menu la heli user u baahan yahay in wax miiran xiriirada uu sii socdo.
Tallaabada 3.On shaashadda soo socda badhanka fursadaha ay tahay in la riixi.
Tallaabada 4.The doorasho ee sumadda / unmark waa in la soo xulay.
Tallaabada 5.Now ikhtiyaarka ah oo dhan Mark in la soo xulay.
6.Now Tallaabada mar kale muhiim ah fursad u tahay in la sii adkeeyey.
Tallaabada 7.The user hadda waxay leedahay in ay doortaan doorasho koobi.
Tallaabada 8.On shaashadda soo socda user leeyahay in uu doorto Copy in ay SIM card in doorasho qaybta hore ee nidaamka ku dhameysan.
2 beddelashada xiriirada si iPhone
Tani waa qaybta labaad ee geeddi-socodka oo u raaci karto sii tallaabooyinka hoose.
Tallaabada 1. goobaha icon waa in la daah furo gudaha menu ah iPhone ka dib galinta SIM ee Nokia Mobile taas oo uu leeyahay oo dhan xiriirada.
Tallaabada 2.Beerta mail, xiriirada iyo doorasho taariikheed waa ka dibna in la daah furo.
Tallaabada 3.On shaashadda soo socda user ay u baahan tahay inay hesho "contacts Import SIM" iyo bar ah ka jaftaa dhammayn nidaamka iyo inay dajiyaan oo dhan xiriiro si ay u iPhone.
Tallaabada ay talaabo oo looga baahan yahay waa sida hoos.
Tallaabada 1. user u baahan yahay si loo hubiyo in phone Nokia uu xiriir la PC iyo Suite OVI waxaa bilaabay halkaas oo user uu leeyahay in uu doorto hagaagsan oo markaas fursadaha u hagaagsan.
Tallaabada 2.On guddi bidix user ay u baahan tahay in ay doortaan xiriirada ka dibna aragti MS ah.
Tallaabada 3.On tallaabada xigta u hagaagsan badhanka oo dhan waa in la sii adkeeyey.
Tallaabada 4.The guul degdeg ah u hagaagsan la soo bandhigi doonaa sida unde.
Tallaabada 5.The user markaas u baahan yahay in ay ku xidhmaan iPhone la PC.
Tallaabada u 6.Once lagu sameeyey user markaas u baahan yahay in la hubiyo in Lugood waxaa lagu bilaabay iyo tab info waxaa la riixi ka dib xulashada qalabka ka guddi bidix ee barnaamijka.
Tallaabada 7.The user markaas u baahan yahay in ay doortaan xiriirrada Google ka dropdown ah oo uu soo gundhig xiriirrada daaqadaha gudaha iyo raac dardar ku reserved iPhone iyo wareejiyo dhammaan xiriirada Nokia in Lugood oo halkan ka iPhone.
Qeybta 4: Nokia PC Suite
Waxaa sidoo kale waa hab aad u fudud in la hubiyo in xiriir waxaa loo wareejiyaa ku dhowaad OS kasta oo kale oo hab fudud. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in Suite ah PC Nokia oo sidoo kale loo yaqaan Suite OVI waxaa lagala soo bixi nidaamka ay weheliyaan Lugood.
Waa habraac laba talaabo qayb ka mid ah oo la raaci karo marka shuruudaha soo socda ay dhammaystirmaan waa in
1.OVI ama Nokia Suite PC
Tallaabada 1. user u baahan yahay in lagu xiro phone Nokia ay u PC la cable USB ah ka dibna waxa uu leeyahay in aan bilowno Suite OVI ka halkaas oo fursad u oolin oo markaas nidaameed Xulashada waa in la soo xulay ee.
Tallaabada 2.On guddi bidix user ay u baahan tahay in ay doortaan xiriirada ka dibna doorasho aragti MS oo hoos ku qoran waxaa lagu arki karaa.
Tallaabada 3. Hadda hagaagsan badhanka oo dhan waa in la weeraray.
Tallaabada 4.This hubiyo in dhammaan xiriirada Nokia ayaa la soo guuriyeen in aragti MS oo halkan ka badbaadiyey in computer ka dhigi doonaa.
1. Tallaabada user leeyahay in ay ku xidhmaan iPhone la PC in la bilaabo wajiga labaad ee geeddi-socodka.
Tallaabada 2.Beerta Lugood software waa in la bilaabay in la hubiyo in qalabka la soo helo iyo tab info waxaa sidoo kale heli.
Tallaabada user 3.Beerta markaas u baahan yahay in la hubiyo in ay "kitaabka Cinwaanka nidaameed iyo Xiriirada" la doorto si loo hubiyo in MS buug cinwaanka saadaasha aan synced oo kaliya laakiin xiriirada waxaa sidoo kale loo wareejiyaa iPhone in ay dhamayso.
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Music, Photos, Videos & SMS ka Nokia si iPhone